Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! एकीकृत समाजवादीले टुंग्यायो १८ पदाधिकारी, महासचिवमा भुसाल, झाँक्री सचिव
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गरेको छ । बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नेताहरुको कार्यविभाजन गरेको हो ।
एकीकृत समाजवादीको पदाधिकारीहरुमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र तेश्रो वरियतामा मुकुन्द न्यौपाने रहनुभएको छ । सात जना उपाध्यक्षमा क्रमशः राजेन्द्र पाण्डे, प्रमेश हमाल, घनेन्द्र बस्नेत, केदार न्यौपाने, केशवलाल श्रेष्ठ, धर्मनाथ प्रसाद साह र जयन्ती राई रहनुभएका छन् ।
महासचिवमा डा.बेदुराम भुसाल चयन हुनुभएको छ भने तीन उपमहासचिवमा प्रकाश ज्वाला, डा. गंगालाल तुलाधर, डा. विजय पौडेल रहनुभएको छ । त्यसैगरी चार जना सचिवहरुमा नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, जगन्नाथ खतिवडा, राजेन्द्रकुमार राई र रामकुमारी झाँक्री रहनुभएको छ ।
बैठकले ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरिएको छ भने ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ७१ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गरेको समाजवादी पार्टीले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ७, २०७८, २०:४३:००